War-bixin: Shiinaha Oo Saldhig-Milletari Ka Furtay Jabuuti | Dhamays Media Group
War-bixin: Shiinaha Oo Saldhig-Milletari Ka Furtay Jabuuti
Jabuuti (Dhamays) – Dawladda Shiinaha ayaa maanta si rasmi ah u furay saldhig miltari oo uu ku leeyahay dalka Jabuuti, kaas oo ah kii ugu horreeyay uu dalkaasi ka dhiso dibedda, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters, kaasi oo uu dhismihiisa bilaabay sannadkii hore.
Jabuuti waa dal yar oo ku yaala badda cas, balse waxa saldhigyo waaweyn oo ciidamo ah ku leh Maraykanka, Faransiiska oo horey u gumeysan jirey dalkaasi, haddana waxaa saldhig kale ka furanaya Shiinaha oo ay iska caddahay dahana sii kordhaya ee uu Jabuuti ka leeyahay.
Derajada Jabuuti ee ah dal xasilooni ay ka jirta, kuna yaala gobol xasarado badan ay ka jiraan ayaa ah faa'iidada ugu weyn ee ay Jabuuti heysato, soona jiidanaya saldhigyada.
Waxa ay dhacdaa marinka ay ka gudbaan Maraakiibta ee Baabul Mandab, halkaasi oo looga sii talaabo Kanaalka Suweys, halkaasi oo ah marin-biyoodka Adduunka ugu mashquulka badan ee maraakiibta ganacsiga ay isticmaalaan.
Jabuuti ayaa Deked u ah dalka aanan badda lahayn ee Itoobiya, iyada oo dhawaan la rakibay Khad tareen oo labada dal ka dhex shaqeeya.
Mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee Shiinuhu ka wadaan halkaasi sida garoomada iyo dekadaha ayaa ah wax ka muuqda oogada dhulkan, si la mid ah dalalka kale ee Afrika. Balse u dhowaanshaha Jabuuti ee dalalka ay xasaradaha ka jiraan ee Afrika iyo Bariga dhexe ayaa ka dhigaya mid soo jiidata saldhigyada ciidamada dalalka shisheeye ee quwadaha waawayn ah.
Tusaale, Soomaaliya oo Jabuuti ka xigta dhanka Koonfureed ayaa waxa ay muddo dheer ahayd meel ay dagaalo halakeeyeen, iyada oo ay kasoo ifbaxeen kooxaha budhcad badeeda iyo waliba Al-shabaab oo halis aad u badan ku heysa amniga gobolka oo dhan.
Sidoo kale, Yemen oo Jabuuti u jirta 20 mile oo kaliya, kagana beegan dhanka waqooyi-bari ayaa waxaa ka socda dagaalo.
Dagaaladan ayaa waxa ay Adduunka ku qasbanayaan in ay soo farogaliyaan, sidaasi darteedna waa in ay saldhigyo ciidan ka samaystaan meelo u dhow oo durba hawlgal laga fulin karo.
Jabuuti waxa ay martigalisaa tirada ciidamada militariga Maraykanka ugu badan ee Afrika jooga, waxayna ku suganyihiin saldhiga lagu magacaabo Camp Lemannier, kuwaasi oo tiradoodu gaadhayso illaa 4,000 oo askari.
Mar uu Afrika socdaal ku marayay xogyahihii hore ee Maraykanka John Kerry ayuu saldhigani lugta sii mariyey, taasi oo calaamad u ah muhiimadda ay Maraykanka u leedahay Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waraysi uu dhawaan siiyay wakaaladda Wararka AFP ku sheegey in Jabuuti iyo Shiinaha ay kala saxeexdeen heshiis dhigaya in Shiinaha uu saldhig ciidamada badda ah ku yeesho dalkaasi Jabuuti, wuxuuna noqonayaa kii ugu horeeyey ee uu Shiinaha ka samaysto meel ka baxsan dalkiisa.
Walwalka Maraykanka ayaa kasii daraya marka la ogaaday in saldhigga Shiinaha laga furayo waqooyiga gobolka Obokh ee Jabuuti, kaasi oo shiiqinaya saldhiga yar ee Maraykanka Jabuuti ku leeyahay.
Saldhigga Maraykanka waxa uu ku sii ooli doonaa halkiisa, Camp Lemonnier, iyada oo heshiiska ay halkaasi ku degenyihiin dhawaan waqtiga loogu daray 10 sano oo dheeraad ah.
Shiinaha dhawaan waxa ay dalka Suudaanta Koonfureed u direen ciidamo gaadhaya 700 oo askari, si ay u difaacaan danaha shidaal ee ay halkaasi ku leeyihiin, waxayna taasi caddaynaysaa in Shiinaha ay diyaar u yihiin in ay sidoo kale difaacdaan danaha ganacsi ee gaaraya $200-da bilyan ee Afrika uu la leeyahay.
Waxaana taasi qeyb ka noqon kara in laga hortago weerarada budhcad-badeedda ay u geysan karaan maraakiibta shixnadaha ganacsiga sida ee u kala goosha bad-weynta Hindiya iyo badda Shiinaha Koonfureed.
Muwaadiniinta Shiinaha ee ka shaqeeya mashaariicda waaweyn ee Afrika ka socda ayaa ka faa'iideysan kara saldhig ciidan oo meel u dhow laga furo, waxaana tusaale loo soo qaadan karaan boqolaalkii qof ee Shiinaha u dhashay ee laga daad-gureeyey Yemen iyo Liibiya markii ay dagaalada ka dhaceen
Maraykanka ayaa Jabuuti siiya $63 milyan oo kiro ah sanad kasta, halka Shiinuhu bixiyo $100 milyan, taasina ay sii dheertahay mashaariicda ay halkaasi ka wadaan, sidaasi darteed waa ay adag tahay sabab loogu maleeyo in Jabuuti ay kala doorato Maraykanka iyo Shiinaha.
Previous: “Abiib Timo-cad Lacag-baa lagaga furfuray Banka Wajaale..” Kulmiye
Next: Somaliland Religious Clerics Loosing Their Trust Worthiness